Wasaarada Horumarinta Caafimadka Somaliland Xaaladeeda Waxba Lagama Qaban Karo[Qalinkii Dr Numcaan] | 18 May News
Wasaarada Horumarinta Caafimadka Somaliland Xaaladeeda Waxba Lagama Qaban Karo[Qalinkii Dr Numcaan]
Imisa #hablood oo #Dirawala ah ayaa ku jira liiska hoose ? Bal ila hubiya arimahan?
Halkan hoose waxa idiinka soo muuqda liiska masuuliyinta wasaarada hormarinta caafimaadka somaliland oo uu ugu horeeyaan masuuliyinta sida wasiirka & agaasimaha guud waxay Haayada #WHO dalbanayaa lacagta kharashka usoo dayso baaburtaana ka kireysato iyaga & xoogheytoda si kormeer ugu soo sameeyaan taalala laga fulin doono bishan September gudaheega somaliland ?
Liiska waxaa ku jira sida ay xaqiijiyeen qaar kamida shaqaalaha caafimaadka #Watchman, #store haye & dhawr #xooghayayasha masuuliyinta wasaarada ah. Su aashu waxey tahey maa la wayey xirfadle caafimaadka? Oo shaqaalaha ay kormeerayaan ku aqoona dhaama waxna ku kordhiya? Waa maya lakin dad gaara oo la wato ayaa meel walba la galineysa?
Todobada dumara ee halkan hoose ku qoran magacyadooda oo sadexan, waa todoba Dirawal waxey qaadayaan masuuliyinta wasaarada hormarinta caafimaadka somaliland oo safaro shaqo ugu kala bixi doona gobalada galbeedka & Barriga somaliland sida ku cad warqada lifaaqa xaga hoose, sida oo kale isla dumarkaas uun baa shaqada kormeerka qabanaya.
Koos mohamud Abdikarim.
Nimco Hussein Barre,
Casha Mohamed Hirsi
Tusaale ahaan Jawaahir adam farah waxey gaadhiga ka xeyneysaa Hargeysa waxayna masuuliyinta wasaarada u qaadeysaa laascanood, halka kuwa kale u ukala baxayaan sida warqada hoose ku cad ukala baxayaan magaalooyinka Burco, Boorama & Hargeysa, arinkani waa ceb umada reer somaliland usoo hooyatey?, wasarada hormarinta caafimadka somaliland.
Dhawr shaqaalaha caafimaadka mudo laba maalmooda ku jirey shaqadan kormeerna ku sameyeynayey inta shaqada laga joojey ayaa waxa loo sheegey iney laba maalmood shaqadu ku koobneyd, waxaana halkoodii lagu badeley watchmans & xooghaymaha masuuliyinta wasarada, Waxa ayaan daro ah shaqaalaha shaqada lahaa muddo laba maalmooda shaqeynayey shaqada laga joojiyey hadana lagu badeley wachmaans & xoogheyn masuuliyinta wasaarada? Sida ay warar nagu soo gaadhayaan #DrBashiir oo ah madaxa waaxda talaalka waa isku dhaceen agaasimaha guud ka dib marka uu qorshihiisii la badeley laguna watchman iyo xoogheynta, sida ay umuuqatana shaqada waa laga reebey oo liiska xaga hoose idiinka muuqda meelna kaga ma jiro.
Shaqsiga kormeerka ku sameynaya waxa looga baahan yahey inuu ka aqoon badan yahey shaqsiga wax talaalaya, si uu qaladaada shaqaalaha ku iman kara u saxo? Xirfadlaha caafimaadka iney xoogheymaha masuuliyinta wasaarada hormarinta caafimaadka somaliland kor meeraan sharaf dhac iyo niyad jab ayey ku tahey waxeyna ku tuseysaa ineyna masuuliyinta wasaarada shaqada daacad ka aheyn. Lakin ay yihin bariis raadis
Waxa kale oo ceeb labaada masuuliyinta oo shaqadiisa qaranka u hayey inuu Guuno weydiisto haayad, shaqaale hoosaadkiisa ku dhex qoran yahey, sida ku cad warqada xaga hoose ka muuqata ee lagu socodsiinayo #WHO. geela duqdiisu durduriso aarankiiisa maxaad umaleyn? Masuuliyinta sida wasiirka caafimaadka, wasiir ku xigeenka & agaasimaha guud ayaa sidaas sameyey maxaad shaqaalaha kale umaleyn, iyada oo aan ogsoonahey misaaniyada Qaranka ugu jiraan mushaarkiisa, Gunadiisa & shidaalka agaasimaha Guud? Marka ay masuuliyinta wasaarada ugu sareeya warqadaha noocan u qorayaan haayadaha iyo deeqbixiyasha, maxay ka aaminayaan, ama sideey ula macaamilayaan dalka & dadka noocan ah.
Sawirada halkan idiin ka muuqda waa watchman wasarada hormarinta caafimadka somaliland talaalka fulinaya.
Warqada ay ku qoran yihiin watchman, Dumar dirawala, masuuliyinta wasaarada ugu sareeya iyo xoogheynta